कोरोनाको उदगम स्थल वुहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति मस्क लगाएर पुग्दा जे भयो ! – " सुलभ खबर "
कोरोनाको उदगम स्थल वुहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति मस्क लगाएर पुग्दा जे भयो !
काठमाडौ । कोरोना भाइरसका कारण थला परेको चीनको वुहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ पुग्नु भएको छ । कोरोना भाइरसको उदगम स्थल मानिएको हुवेई प्रान्तको वुहान सहर पुग्नु भएको हो । पिपुल्स डेलीका अनुसार राष्ट्रपति सी मंगलबार बिहान वुहान पुग्नु भएको हो ।
उहाँले त्यहाँ कोरोनाविरूद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, पार्टीका अधिकारी, सैनिक कमाण्डर, सामाजिक कार्यकर्तालगायतसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । वुहानमा डिसेम्बर तेस्रो सातादेखि कोरोना भाइरस देखिन थालेको थियो, जुन अहिले विस्तारै कम हुँदैछ । कोरोना भाइरसविरूद्ध राष्ट्रपति सीले जनयु द्ध नै घोषणा गर्नुभएको थियो ।
कोरोना फैलिएपछि उहाँ पहिलो पटक वुहान पुग्नु भएको हो । कोरोना भाइरसको ठूलो संकट व्यहोरेको चीनले पछिल्ला दिनमा भाइरस नियन्त्रणमा ठूलो सफलता पाएको छ । सोमबार चीनमा जम्मा १९ जनामा मात्र कोरोनाभाइरसको नयाँ संक्रमण भेटिएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । १९ मध्ये पनि १७ जनालाई मात्र चीन भित्र संक्रमण भएको बताइएको छ ।
दुई जना चिनियाँ नागरिक विदेशबाट फर्किदा संक्रमित भएर आएका हुन् । चीनभित्र संक्रमित भएका १७ जना सबै कोरोना भाइरसको उदगम स्थल हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहान सहरका नागरिक हुन् । लगातार तेस्रो दिन चीनमा वुहान सहरबाहिर कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छैन ।